Shiikh Shariif oo weerar afka ah ku qaaday DFS • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Shiikh Shariif oo weerar afka ah ku qaaday DFS
September 23, 2019 - By: Ayub Ali
Madaxwaynihii hore ee Soomaaliya Shiikh Shariif Shiikh Axmed, oo shir jiraa’id ku qabtay xarunta xibsiga Midnimo Qaran ayaa si kulul uga hadlay xaaladda guud ee dalka iyo xanibaadkii shalay la saaray.
Sheekh Shariif Sh.Axmed Madaxweynihii hore ee Soomaaliya oo si adag uga jawaabay is hor-istaaggii shalay lagu sameeyey
Sheekh Shariif Sh.Axmed Madaxweynihii hore ee Soomaaliya oo si adag uga jawaabay is hor-istaaggii shalay lagu sameeyey ayaa yiri"waxaan rabaa inuu warkaygu cadaado dowladdu waxay kusocotaa hanaan qaldan oo keenikara in dowladdu burburto kamana aqbalikarno Shariif oo sii hadlaya ayaa yiri"Farmaajo isagoo suud iyo boorso wata anaa magacaabay dalkaan wax ka galay ma jiro isagaa ka faa'ideystay kheyrrena waa la mid anaga waxbaa naga galay inuu burburana kama yeeleyno dariiqaa ku socoto waa qaldantahay waxaan leennahay meeshaa joogto ma dhaafikartid Soomaalina ha isku timaaddo"https://youtu.be/KIGNzLd9Ydg
Posted by Dalsan TV on Monday, September 23, 2019
Shiikh Shariif, oo si qoro dheer uga hadlay xariyadii la saaray diyaaradii dayidka ahayd ee u qaadi lahayd magaalada Kismaayo ayaa yiri ” 15 sano garoonkii xirnaa ee diyaaradaha oo anaa furay anigana la iima diidi karo, illeen dowlad ma aragnee”. ayuu yiri Shiikh Shariif.
Shiikh Shariif ayaa waxaa uu ku dhaliilay dowladda arimo ay ka yihiin amniga, dhaqaalaha iyo dastuurka oo uu sheegay in dhamman ay ka gaabisay, taasi bedalkeedna uu tilmaamay in ay xooga saartay dagaalka ay kula jirto siyaasiyiinta mucaaradka.
“Aniga waxaan lahaa dowladdan 4-ta sano ha la sugo, laakiin haddii aysan dowladan samir u lahayn inay dadka u ogolaato xuquuqdii asaasiga ahayd, sidee dowladdan loogu aaminaa doorasho in lala tartamo.” ayuu yir Madaxweynihii hore ee Soomaaliya.
Puntland oo xirtay Sharci yaqaan Muuse Cali Jaamac.